हरिवंश आचार्यको नयाँ गीत ‘म त परे माकुरीको जालमा परेर’ सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं - चर्चित हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । हास्यकलाकार तथा गायक हरिवंश आचार्य र टिका प्रसाईको सुमधुर स्वरमा 'म त परे माकुरीको जालमा परेर' बोलको गीत बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी हास्यकलाकार तथा गायक हरिवंश आचार्यले महसंचार युट्युब च्यानल मार्फत गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । गीतमा शब्द हिरण्य भोजपुरेको रहेको छ भने संगित हरिशरणको र...
पानी भित्रै बच्चा जन्माइन् यी अभिनेत्रीले
काठमाडौं - ब्राजिलियन मोडेल तथा अभिनेत्री ब्रुना अब्दुल्लाले पानी भित्रै छोरी जन्माएकी छिन् । उनले केहि दिन अघि पानीभित्र छोरी जन्माएकी हुन् । आफुले छोरीलाई पानी भित्र जन्माएको बारे ब्रुना आफैले बताएकी हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफुले पानीमा छोरीलाई जन्म दिएको बताएकी हुन् । उनले पतिसँगको एउटा तस्वीर शेयर गर्दै आफुले पानीभित्र बच्चा जन्माएको बताएकी हुन् । उक्त तस्वीरमा उनले लेखेकी छिन...
काठमाडौं । हास्यकलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका छन् । गायिका आस्था राउत प्रहरीको फरार सूचीमा परेको घटनाले बहस पाइरहेका बेला अर्का कलाकार माग्ने बुढा ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका हुन् । तर गायिका आस्थाको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहे पनि माग्ने बुढाले आफूले गल्ती गरेकै कारण कारबाहीमा परेका बताएका छन् । बुधबार बिहान सिट बेल्ट नलगाइ कार चलाएपछि उनलाई ट्राफिक प्र...
व्याक हट्यो प्रहरी, आस्था राउतलाई पक्राउ नगर्ने
काठमाडौँ । यसअघि नेपाल छिर्नसाथ आस्था राउतलाई समात्ने भनिरहेको प्रहरी एक कदम पछि हटेको छ । आस्था राउत यतिबेला सिक्किममा छिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । गायिका आस्था राउतलाई स्वदेश फर्किनासाथ पक्रिहाल्ने योजना प्रहरीले बनाएको थियो । प्रहरीले राउतलाई फरार सूचीमा राखेको छ, तर राउत फरार नभई सिक्किमको सांस्कृतिक कार्यक्रममा छिन् । आफूमाथि दुर्व्यवहार गर...
मदिरा पिएपछि पैसा तिर्ने बेलामा ज्योती मगरले झिकिन् लफडा
काठमाडौं, ८ माघ । चर्चामा आइरहने गायिका ज्योति मगर यसपटक फेरि विवादमा परेकी छिन् । दरबारमार्गस्थित एक रेष्टुरेण्टका कामदारसँग अभद्र व्यवहार गरेको विषयले चर्चामा आएकी हुन् । ज्योतिसहित एकजना केटा र अर्की केटीले सातहजारको मदिरा र सितन खाए । पैाि तिर्ने बेला स्वाइप मेसिन नभएको भन्दैैै ज्योतिले लफडा झिकिन् । रेष्टुरेण्टका कामदारले दरबारमार्ग प्रहरीमा खरब गरे । प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चल्न स...
के भयो विपिन कार्कीको पुस्तक लेख्ने कुरा ?
काठमाडौं। अभिनेता विपिन कार्कीले निर्धारित समय दिएर पुस्तक निकाल्छु भनिहाल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। चलचित्रमा अभिनय गर्दाको अनुभव र आफूले निभाएको पात्रमा केन्द्रित रहेर पुस्तक लेख्दै गरेको विपिनले एक वर्षअगाडीको भेटमा बताएका थिए। चलचित्रमा चरित्र जन्माउन, निर्माण गर्न कति गाह्रो हुन्छ? त्यसका लागि कति समय खर्चिनुपर्छ? आफूले चलचित्रमा विभिन्न चरित्र निर्वाह गर्दाको अनुभवमा आधारित रहेर पुस...
भारतीय समीक्षकले माफी मागेपछि दीपकराजले भने – हाम्रा समीक्षकले कहिले बुझ्ने ?
काठमाडौं – निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले बेलाबेलामा नेपाली समीक्षकतर्फ कटाक्ष गर्ने गर्छन् । नेपाली समीक्षकले आफूलाई मन परेका फिल्म मात्र फिल्म हुन् भन्ने गरेको आरोप गिरीले लगाउने गरेका छन् । हालै भारतीय फिल्म ‘तान्हाजी’ ले बक्सअफिसमा करोडौंको व्यापार गरेपछि भारतीय समीक्षक कमल आर खानले माफी मागेका छन् । यसअघि उनले यो फिल्म राम्रो नभएको भन्दै त्यहीअनुसारको समीक्षा गरेका थिए । फिल्...
जानिराख्नुस ! यस्ता युवती, प्रेममा इमान्दार हुन्छन्
प्रेम महशुस गर्ने विषय हो । कसैको अनुहार, रंग, उचाइ र अन्य कुराले प्रेमलाई खासै प्रभाव पार्दैन । दुई जना पार्टनरबीचको भावनात्मक एकता नै प्रेम हो । प्रेम हेरकबीच हुन्छ । आमावुवाले छोराछोरी, दाजु भाइ र दिदीबहिनबीचको आत्मियतामा प्रेम रहेको हुन्छ । तर आज हामी यहाँ पुरुषले महिलालाई र महिलाले पुरुषलाई गर्ने प्रेमबारे केही चर्चा गर्दै छौं । केही युवाहरु युवतीको अनुहार र शरीर तथा केही युवतीहर...
यस्ता गुणका भएको नारीहरुको घर स्वर्ग समान हुन्छ
काठमाडौँ भनिन्छ एउटा सफल पुरुषको पछाडि एकजना असल नारीको भूमिका हुन्छ । हुनपनि असल नारी भएको घर नै स्वर्ग समान हुन्छ । शास्त्रले पनि यहि बताउँदै आएको छ की असल नारी कुनैपनि घरको गहना हो । यहाँ हामीले नारीमा हुनुपर्ने केही गुणहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन गुण हुने नारीहरु भएको घर स्वर्ग समान हुन्छ । – जुन नारी मीठो बचन बोछिन्, जुन नारीको आवाज मधुर छ र हरेक क्षण मायालु बोली÷ब्यवहार दर्शाउँछिन् भने...
जनकपुर फेसन शो & मुइजिकल ईभेन्ट (सिजन -३) को अन्तिम अडिसन
काठमाडौँ /जनकपुर मा भर्खरै एल एड एन मोडल एजेन्सीले आयोजना गरेको ‘जनकपुर फेसन शो & मुइजिकल ईभेन्ट (सिजन -३) -२०७६’ को अन्तिम अडिसन यहि आउदो माघ ११ गते सनिबार का दिन मासाला कटेज - जनकपुर मा हुदैछ । माघ ०४ गते सनिबारका दिन जनकपुर को मासाला कटेज मा पहिलो अडिसन गरिएको थियो भने अन्तिम अडिसन माघ 11गते सनिबारका दिन हुने भनि आयोजक नितिन कर्ण (कायस्थ) ले जानकारी दिनुभयो । एस एल एंड एन मोडेल अजेनसी ले (...